Google weputara Sodar, ngwa oru gbakoro anya nchekwa | Gam akporosis
Google weputara Sodar, ngwa oru gbakoro anya nchekwa
Google ekwuwaala na Sodar igba egbe, akụrụngwa eziokwu agbakwunyere iji wee gbakọọ ebe nchekwa nchekwa site na COVID-19 nwere ike ibute ọrịa. Na ụzọ dị mfe anyị nwere ike isi mara ma enwere mita abụọ ahụ n'etiti onye ọrụ na-eji weebụ yana onye nọ nso, maka nke a ọ dị mkpa iji igwefoto nke ngwaọrụ mkpanaka anyị.
Ọ dịghị mkpa ka ịwụnye ngwa ọ bụla, naanị nweta ya Peeji nke Sodar wee bido ya iji tụọ etu anyị si dị anya ma si otú a tụọ ụzọ dị anya n’oge. Ngwaọrụ a dabere na WebXR, API nke na-enye ndị nchọgharị ohere iji eziokwu gbara ụba na Virtual Reality.
1 Ọ ga-arụ ọrụ na Google Chrome
2 Enwerela ngwa iji tụọ ebe dị anya
Ọ ga-arụ ọrụ na Google Chrome
ụda Google ga-arụ ọrụ na ekwentị na gam akporo os na iji ngwa Google Chrome dị mkpa ka ọ rụọ ọrụ, ma ọ bụghị ya enweghị ike iji ya. Ọ bụrụ na ị na-eji sistemụ ọzọ na ihe nchọgharị ọzọ, ọ ga-egosi anyị ozi ịdọ aka na ntị na ọ dakọtara.
Mgbe imeghe adreesị ahụ, ọ ga-akọwa na a ga-eji ntuziaka eziokwu dịwanye elu iji lee anya mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na ama. Ngwá ọrụ ahụ ga-ajụ anyị na mbụ ebe ala ga-atụle nha.
Ọ na-egosi izi ezi nke mita abụọ ahụ, ya mere ọ ga-adị oke mkpa ma ọ bụrụ na ị chọrọ ọbụna tụọ anya n'etiti ihe, ihe na-enye gị ohere ịmara n'ime obere sekọnd. Soda dị na nyocha na Google ma nwee ike tozuo oke site na iji ngwa weebụ.
Enwerela ngwa iji tụọ ebe dị anya
Ugbua na 2020 etinyere ngwa iji tụọ ọdịiche dị n'etiti ndị mmadụ, akpọrọ ya 1point5 na United Nations nọ n'azụ ngwa a nke ga-emezigharị n'akụkụ ụfọdụ. Ngwa ahụ na-eji Bluetooth iji chịkwaa ebe dị anya ma ọ bụghị ekwentị, ebe ọ bụ na n'ọnọdụ ụfọdụ ha na-eji ihe mmetụta azụ ma ọ bụ n'ihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google weputara Sodar, ngwa oru gbakoro anya nchekwa
Nokia na-ekwuwapụta ekwentị ọhụrụ C5 Endi, C2 Tava na C2 Tennen
[Na] Oyi Egwuregwu Mee Androidsis: SpongeBob Isi nri School